Korea Atsimo mety hamotopototra ireo olan'ny bateria iPhone 6s | Vaovao IPhone
Ny olan'ny bateria amin'ny iPhone 6 dia mitohy mitondra rambony. Ny filazana fa ny fizakantenan'ny iPhone 6s dia tsara dia lainga tokoa. Ny batterie iPhone 6s androany dia tsy mifanaraka amin'ny toetr'andro ary mahalana ny andro raha tsy mila ampandoavintsika azy io amin'ny afovoan'ny tolakandro. Etsy ankilany, Apple dia tsy mitsahatra manipy baolina amin'io lafiny io, milaza fa ny olana amin'ny fametahana adapter sandoka sy karazana porofo hafa no mety ho antony mahatonga ny olana sasany, fa tsy ny rehetra. Amin'izao fomba izao, any Korea Atsimo dia dinihin'izy ireo ny famotopotorana ny fahatapahana tampoka ny iPhone 6s hahafantarana raha milamina izy ireo na tsia.
Es Ny Korea Herald iza no mandefa izany fampahalalana izany avy amin'ny firenena aziatika. Raha ny fahitana azy, ny masoivoho antsoina hoe Agence for Technology and Standards (KATS) Koreana Tatsimo no tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana izany famotopotorana izany, noho ny famoahana nataon'ny tompon'andraikitra "tsy fantatra anarana". Manontany tena ny kely indrindra, satria tsy nanokatra fanadihadiana mihitsy ny KATS raha nipoaka kosa ny Samsung Galaxy Note 7 havia sy havanana Manerana an'izao tontolo izao dia eritreretinay fa ny orinasa Samsung dia orinasa Koreana Tatsimo dia mety misy ifandraisany amin'izany.
Farany, ny tadiavin'izy ireo hazavaina dia hoe mety ho ratsy na tsia ho azy ireo ny hoe tapaka tampoka ireo fitaovana ireo. Tamin'ny volana novambra dia natombok'i Apple ny programa fanoloana sy fanamboarana an'ireto bateria ireto, tamin'ny filazany fa vitsy ihany ny fitaovam-piadiana novokarina teo anelanelan'ny volana septambra sy oktobra 2015, na izany aza, maro ny fitaovana toa voakasik'izany ary tsy misy ifandraisany amin'ny daty izay natoron'i Apple tamin'izany fotoana izany. Ny sensor amin'ny rivotra no manery ny batterie hamono tampoka hisorohana ny faharatsiana lehibe kokoa, ary ny tena izy dia mbola tsy nisy nipoaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Korea Atsimo mety hamotopototra ireo olan'ny bateria iPhone 6s
Inona no mania milaza hoe "olan'ny bateria 6S." Isika izay manana ny 6 sy 6 Plus koa dia manana izany olana izany.
Raha ny marina, ny iOS 10.2 dia TSY nametraka ny olan'ny bateria, ny mifanohitra amin'izay dia vao mainka niharatsy azy.
Ry namako tolakandro (Ai) tolak'andro tolak'andro, afaka manampy ahy ve ianao hoe inona no tokony hataoko, ny iPhone 6s Plus rehefa mahatratra 30% ary indraindray amin'ny 40% dia vonoina izany fa maty ny bateria, tsy manana antoka intsony aho fa tokony hamaha izy ireo olana Efa tany amin'ny orinasa izy io, nividy ilay fitaovana nampiasaina izay tsy ananako naoty na fividianana fanantenana afaka manampy ahy ianao, arahaba.
AT dia hoy izy:
Novain'izy ireo ny batterin'ny iPhone 6 S (miaraka amin'ny herintaona fampiasana), satria tato ho ato dia maty niaraka tamin'ny bateria 70% (avy eo rehefa nampidiriko dia niverina tany amin'ny nisy azy).
Tsy maintsy nankany amin'ny App Store in-droa aho ary tamin'ny fanindroany dia niandry adiny roa sy sasany mba hamenoana ny bateria.
Na dia maimaim-poana aza dia tonga ny fotoana laniko amin'ny olany. Tokony hanonitra izany fotoana very izany izy ireo.
Valiny amin'i AT
Ny fampiharana Apple Support dia misy any Etazonia izao